Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 168936 times)
« Reply #60 on: June 06, 2015, 03:19:48 PM »
« Reply #61 on: June 08, 2015, 12:02:52 PM »
Quote from: xsajha on June 06, 2015, 03:19:48 PM
« Reply #62 on: June 21, 2015, 04:39:44 AM »
« Reply #63 on: June 23, 2015, 04:42:53 AM »
« Reply #64 on: June 24, 2015, 12:39:00 AM »
« Reply #65 on: July 16, 2015, 03:07:42 PM »
« Reply #66 on: August 03, 2015, 01:16:01 AM »
Interview .... not good !!
photo matrai ramro
« Reply #67 on: August 09, 2015, 02:54:12 PM »
« Reply #68 on: October 02, 2015, 03:27:40 PM »
sushma karki.jpg (40.94 kB, 639x446 - viewed 387 times.)
« Reply #69 on: October 16, 2015, 01:57:23 PM »
प्रेमीलाई ट्याटुबाट पनि बिदाई
काठमाण्डौ, २०७१ चैत्र १०, मंगलवार
अभिनेत्री सुष्मा कार्की अहिले शान्त चरा जस्तै उड्न थालेकी छिन् । उनले आफ्नो ढाडमा खोपेको ट्याटुले पनि यही कुराको संकेत गर्छ ।
सुष्माको ढाडमा लामो समयसम्म प्रेमी निरनको ट्याटु थियो । सुष्माले यो ट्याटुलाई आफ्नो निरनप्रतिको माया भन्दै आएकी थिइन् । जब निरनसँगको प्रेम पूर्ण रुपमा टुट्यो, सुष्माले ट्याटु पनि हटाइन् ।
निरन र सुष्मा करिब १ बर्ष लिभिङ टुगेदरमा पनि बसेका थिए । एक पटक ब्रेक गरेर पुन: शुष्मा र निरनको प्रेम जोडिएको थियो । सुष्माले निरनले आफूलाई पिट्नेदेखि थर्काउने र काममा पनि बाधा पार्ने गरेको गुनासो गर्दै दोस्रो पटक जोडिएको प्रेमलाई ब्रेक गरेकी हुन् ।
निरनसँग अगाडी बढ्न नसकेपछि सुष्माले अहिले प्रेमीको नामको ट्याटु फालेर उड्दै गरेका चरा र प्वाखको ट्याटु बनाएकी छिन् । उनले चरा जस्तै शान्त रुपमा उड्न चाहेको भन्दै यसैको प्रतिकका लागि ट्याटु बनाएको बताइन् ।
सुष्मा अहिले आफू खुल्ला भएको बताउँदै आएकी थिइन् । प्रेमीसँग सम्बन्ध टुटेसँगै उनले विभिन्न अनलाइनका लागि विकिनीमा तस्बिर पनि खिचाइन् । उनले अब प्रेम नगर्ने बताएकी छिन् । शुष्माको कुरा, कति पत्याउने कति नपत्याउने ।
केहि समय पहिलेको कुरा :
मलाई भेट्न ठमेल आउँछिन् : सुस्मा प्रेमी
बैशाख ३१ गते, मंगलबार, मेरो सिनेमा
व्रेकअप पश्चात् पनि आफुलाई भेट्न आउने गरेको एक्ट्रेस शुस्मा कार्कीका प्रेमी निरन श्रेष्ठले बताएका छन् । मेरो सिनेमासँगको फोन टकमा अनुप्रस्थ व्यान्डका भोकलिस्ट निरनले भने, ‘सुस्मा मेरो पर्फमेन्स हेर्न साँझ ठमेलको रेष्टुरेन्ट आउने गर्छिन् । हाम्रो प्रायः फोनमा कुरा हुन्छ तर हामी अब राम्रो साथी मात्र हुन सक्छौ ।’ त्यस्तै नरेनले सुस्माकी आमाले आफुहरुको अफयेरमा भिलेन रोल खेलेको रहस्य समेत खोलेका छन् । नरेनले सेन्टी मुडमा भने, ‘हामी विगत एक वर्ष देखी लिभिङ टुगेदरमा थियौं । यो कुरा सुस्माको ममीलाई मन परेको रहेनछ । अन्त्यमा सुस्माले पनि मलाई छोडेर मम्मीको पक्ष लिइन् ।’ ‘सुस्माले मिडियामा व्रेकअपको हल्ला फैलाएर आफ्नो बच्चापन देखाइन्’ नरेनले सेभ साइड रोजे, ‘अफयेरमा झगडा नहुने भन्ने होइन् । यसलाई सामान्य रुपमा लिन सक्नुपर्छ । तर उनले किन मिडियामा बोलिन् मलाई थाहा छैन् । म आफ्नो करिअर कन्सीयस छु, मलाई कन्ट्रोभर्सी मन पर्दैन् ।’
यस बारेमा सुस्माले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन् । मेरो सिनेमासँगको छोटो कुराकानीमा सुस्माले भनेकी छिन्, ‘नरेनले मलाई बुझ्ने कोशिस गरेन्’ ।